​भ्रष्ट नेता र दरिद्र जनता
Monday, 14 Aug, 2017 6:48 PM
शम्भु श्रेष्ठ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर हुँदै जानु हो । जुन देशमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास हुँदैन, त्यो देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र कानुनीराज स्थापित हुन सक्दैन । यसो हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलका नेताको भ्रष्ट मानसिकता र चरित्र नै हो । चुनाव जित्न लाखौं रकम खर्च गर्ने र चुनाव जितेपछि करोडौं कमाउने सोचले गर्दा नै नेपालका उद्योगी÷व्यवसायी मगन्ते, राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता धनाढ्य बन्दै गएका हुन् । यो लोकतन्त्रको विकृत रुप हो । समयमै यसलाई सच्याउन सकिएन भने लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ र जनताले वैकल्पिक व्यवस्था रोज्न सक्छन् । सत्तरी वर्षसम्म नेपालको राजनीतिले स्थिरता पाउन नसक्नुको एउटा कारण शासक वर्गमा उम्रिएको भ्रष्ट मानसिकता पनि हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा लोकतन्त्रको आवरणमा जताततै लूटतन्त्र चलेको छ । गरिब जनता हातमुख जोर्न ५० डिग्रीको तापक्रममा भौतारिरहेका छन् भने तिनले भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधि लुट्नै व्यस्त छन् । अहिले नेपालको स्थिति अरुका कारणले नभई शासकवर्गकै कारण यतिसम्म खत्तम भएको छ कि यो भन्दा खत्तम हुने ठाउँ अरु सायदै होला । सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीशमाथिकोे महाअभियोग स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको प्रहार थियो । सरकारले गरेका गलत निर्णय सच्याउन खोज्दा र केही भ्रष्टाचारीमाथि दण्ड सजाय गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि सत्तारुढ दलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको घटना लोकतन्त्रमा लाजमर्दो कुरा हो । त्यति मात्रै होइन, राजदूत नियुक्तिदेखि संवैधानिक नियुक्ति सबै राजनीतिक भागबण्डामा चल्नु अर्को विकृति हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति भएपछि न्याय र अन्याय छुट्याउने कसले ? लोकतान्त्रिक नेपालमा भ्रष्टाचारी को हो ? भन्ने भन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने प्रश्न अहं बनेर आएको छ । राजनीतिक विकृतिले भित्र्याएका यी विसंगतिले स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई दिनहुँ विद्रोही बनाइरहेको छ । दिनहुँ अखबारमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको भण्डाफोर भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु कमिशनमा डुबेको खबर आएको छ । तर, तिनीहरुमाथि के कारवाही भयो भन्ने जवाफ जनताले पाउन नसक्दा जनता भुसभित्रको भुंग्रो जस्तो बनेका छन् ।
नेताहरुको भ्रष्ट मानसिकता र जनताको दरिद्रताको फाइदा विदेशी शक्तिले उठाउँदै आएका छन् । गणतान्त्रिक नेपालमा नौ नौ महिनामा सरकार फेरिने घटनाका पछाडि पनि तिनै विदेशी शक्तिको हात रहेको छ । नेपाललाई चौतर्फी रुपमा कमजोर बनाउने र त्यसमाथि खेल्ने विदेशी शक्ति सफल हुँदै आएका छन् भने नेपाली जनता असफल हुनुको परिणाम पनि यही नै हो । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रमुख शक्ति एक नहुनु र संविधानप्रति विदेशी शक्तिको असन्तुष्टि जारी रहनुको पछाडि पनि नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने उद्देश्य हो । यो कुरा हाम्रा नेताले नबुझेका होइनन् । बुझेर पनि त्यो शक्तिको जालोबाट हाम्रा नेता उम्कन नसक्नुको कारण आफू पनि तिनै शक्तिद्वारा स्थापित हुनु हो । यो कुरा प्रचण्डले पोखरामा खुलाएका छन् । प्रचण्डले पोखरामा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको कुरा सार्वजनिक रुपमा त्यत्तिकै बोलेका छैनन् । सायद, त्यसैका लागि प्रचण्डलाई प्रस्तावक बन्न बाध्य पारिएको त होइन ? नेपालको राजनीतिलाई यो कोणबाट पनि विश्लेषण गरिनुपर्छ ।